Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment कस्तो कपालमा कुन तेल लगाउने र कसरी प्रयोग गर्ने ? जान्नुहोस - Pnpkhabar.com
एजेन्सी : स्वस्थ र सुन्दर कपालका लागि तेल जरुरी हुन्छ । तर, कपालमा तेल लगाउने पनि तरिका हुन्छ । कपालअनुसार फरक–फरक तेल आवश्यक पर्न सक्छ । कसरी प्रयोग गर्ने तेल ? जान्नुहोस